बैंकमा रकम राख्न र निकाल्न कडाइ | Mechikali Daily
बैंकमा रकम राख्न र निकाल्न कडाइ
Posted By: मेचीकाली डेस्कon: २४ श्रावण २०७४, मंगलवार ०७:३९
बुटवल, । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ व्यवस्थाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रकम निकाल्न र राख्न कडाइ गरेका छन् । नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरुमा परिचयपत्र ‘आतंक’ समेत मच्चिएको छ । रकम निकाल्न मात्र होइन, थोरै रकम जम्मा गर्न पनि परिचय पत्र चाहिने भएपछि यस्तो आतंक मच्चिएको हो ।
केहीदिन अघि आफ्नो डिम्याट एकाउन्ट रिन्यूका लागि एक सय रुपैंयाँ जम्मा गर्न बुटवलको एक बैंकमा पुगेका मनिष न्यौपानेसँग काउन्टरका कर्मचारीले परिचयपत्र मागे । अलमलमा पर्दै न्यौपानेले सोधे–‘एक सय रुपैंयाँ जम्मा गर्न पनि परिचयपत्र चाहिन्छ र ?’ बैंकका कर्मचारीले जवाफ फर्काए–‘एक सय रुपैंयाँ होइन, एक रुपैंयाँ जम्मा गर्न पनि परिचयपत्र चाहिने नियम छ । हामीले चाहिँदैन भनेर भएन, राष्ट्र बैंकले यस्तै नियम बनाएको छ । हामीले के गर्ने ? नियमपालन नगरे अडिटरले समात्छ ।’
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अचेल अरुको खातामा रकम जम्मा गरिदिन जम्माकर्ताको नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र वा राहदानी जस्ता राज्यबाट प्रमाणित परिचय पत्र अनिवार्य चाहिन्छ । यसअघि रकम जम्मा गर्दा परिचयपत्र चाहिने व्यवस्था थिएन । एक लाख रुपैंयाँभन्दा बढी रकम बैंकबाट निकाल्नु परेमा मात्र परिचय पत्र अनिवार्य थियो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि २०७३ असार ३० गते जारी गरेको परिपत्रको ५ नं. बुँदामा भनिएको छ–‘ग्राहक बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले ग्राहकको खातामा नगदै जम्मा गर्न आएमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिको पहिचान हुन सक्ने विवरण तथा कागजात लिनुका साथै नगद जम्मा गर्नुको प्रयोजन समेत खुलाउनु पर्नेछ ।’
साउन १ गतेदेखि आफ्नै खातामा पैसा जम्मा गर्न पनि खातावालाको हस्ताक्षर प्रमाणित हुनुपर्छ । ‘राष्ट्र बैंकको परिपत्रलाई पालना गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रकम झिक्न र राख्नमा कडाइ गरेका हुन् ।’ एनआइसी एशिया बैंक लिमिटेड, लुम्बिनी क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख तिलकसुन्दर कार्कीले भने, ‘कारोबारमा संग्लन व्यक्ति यकीन गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।’ उनी नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गराउन पनि यस्तो नियम आएको हुनसक्ने बताउँछन् ।
मूलतः बैंकमा नियमित कारोबार गर्नेहरु भन्दा कहिलेकाहीँ कारोबार गर्न जानेहरु राष्ट्र बैंकको नियमबाट बढी प्रभावित भएका छन् । कतिपय बैंकहरुले एक लाख वा सोभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा मात्र परिचय खोजे पनि धेरैजसोले सानो रकमका लागि पनि परिचयपत्र माग्ने गरेको पाइएको छ । एक लाखभन्दा बढी जम्मा गर्दा मात्र परिचयपत्र माग्ने बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको परिपत्रको बुँदा नं. ३ मा टेकिएको बताउँछन् । सो बुँदामा भएिको छ–‘इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुले नियमावलीको नियम ३ बमोजिम व्यवसायिक सम्बन्ध नभएको वा खाता नभएको ग्राहकबाट रु.एक लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्राभन्दा बढीको आकास्मिक कारोबार भएमा निज ग्राहकको पहिचान हुन सक्ने विवरण र कागजात लिनुपर्नेछ ।’
बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको परिपत्रलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्दा पनि सेवाग्राहीहरु समस्यामा परेका छन् । सानो–सानो रकमको कारोबारमा पनि परिचयपत्रको व्यवस्था गरिँदा आफूहरु मर्कामा परेको सेवाग्राहीका गुनासो छ । सेवाग्राहीहरु सानो कारोबारमा गरिएको कडाइ व्यवहारिक नभएको तर्क गर्छन् । ‘कारोबारको एउटा सीमा तोकेर यो नियम लागू गर्नुपर्दथ्यो ।’ तिलोत्तमाका रामचन्द्र कार्की भन्छन्, ‘दुई÷चार हजार जम्मा गर्दा पनि परिचयपत्र खोज्नु उचित भएन ।’
मौद्रिक नीतिमा कस्तो छ व्यवस्था ?
गत असार २५ गते राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को मौद्रिक नीतिअनुसार बैंकहरुले नयाँ व्यवस्थालाई पालना गरेका हुन् । मौद्रिक नीतिको १२८ औँ बुँदामा लेखिएको छ–‘नगद कारोबारबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न रु. ३० लाखभन्दा बढीको कारोबार अनिवार्य रुपमा चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७४ साउन १ देखि १० लाख वा सो भन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रुपमा एकाण्टपेयी चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
त्यही व्यवस्थालाई टेकेर असार ३० मा बैंकहरुलाई परिपत्र गर्दै राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४४ग को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आफ्ना ग्राहकका सबै गतिविधिको तथ्यगत प्रमाण राख्नू भनेको छ ।’ अचेल एउटै व्यक्तिका नाममा काटिएका साना–साना रकमका दुई वटा चेकहरु समेत बैंकले साट्दैनन् । दश लाख वा सोभन्दा माथिको रकम नगद निकाल्न पाइँदैन । दश लाखभन्दा बढीको स्रोत कडाइकासाथ खोज्न थलिएको छ । अरुको खातामा जम्मा गर्ने रकमको मात्र होइन आफ्नै खातामा पैसा जम्मा गर्न पनि रकमको स्रोत देखाउनुपर्छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग जोडिएको छ नयाँ नियम
राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग जोेडेर बैंकिङ कारोबारमा कडाइ गरेको हो । अवैध रुपमा कमाएको पैसालाई बैंकमा पु¥याएर वैध गराउने प्रवृत्ति बढेसँगै राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कारोबारमा कडाइ गरेको हो । बैंकहरुले हरेक ग्राहकको शंकास्पद सूचना राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय सूचना इकाइमा दिने त्यहाँबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । मान्छेहरुको खराब नियतबाट धन आर्जन गर्ने बानीका कारण वर्तमान अवस्था सिर्जना भएको हो ।
अपराधिक कार्यबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रान्समा सन् १९८९ मा वित्तीय कारबाही कार्यदल गठन भएको थियो । सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाको दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक केन्द्रमा आतंककारी आक्रमण भएपछि कार्यदलले विश्वव्यापी सञ्जाल विस्तार ग¥यो । कार्यदलले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा सम्पत्ति शुिद्धकरणलगायत आतकंकारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्नु पर्ने विषयवस्तु थप्यो । नेपाल सन् २००२ मा एशिया प्रसान्त क्षेत्रको समूह सदस्य बनेको हो ।
ऐन निर्माणको झण्डै एक दशक मौन र निष्क्रिय जस्तै बनेको नेपाल अहिले आएर कडाइकासाथ लाग्नुको मुख्य कारण भनेकै वित्तीय कारबाही कार्यदलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा सन् २०१९÷२०२० भित्र नेपालले मापदण्ड पूरा गरिसकेको हुनुपर्ने हो भने सहायक कारणमा देशमा सुशासन कायम । सन् २०१९÷२०२० भित्रमा निश्चित भएको मूल्याङ्कन सम्मेलनमा नेपालले यस क्षेत्रमा गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
इदि मुद्रा निर्मलीकरण प्रगति मूल्याङ्कनमा नेपालको प्रतिवेदन कैफियत देखियो भने नेपाल कार्यदलको कालो सूचिमा पर्नेछ । यसबाट नेपालले पाउने बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय वैदेशिक सहायता कटौती हुनेछ । यस्तो नहोस् भन्नका लागि पनि सरकारी निकायहरु सक्रिय भएका हुन् । अर्थतन्त्र स्वच्छ र परादर्शी बनाउन अहिलेको नियम राम्रो भए पनि सानो कारोबारमा भैरहेको कडाइलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।